နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၀.၉.၂၀၂၀ – Sports A2Z
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၀.၉.၂၀၂၀
–	အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဓိက နောက်ခံလူ ကီရန် တီယာနီရဲ့ အခြေအနေက ကြွက်သားအနည်းငယ် နာကျင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး ပြင်းထန်မှု မရှိကြောင်းနဲ့ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအပြီး ပွဲအမီ မသက်သာတာကြောင့်သာ မသုံးစွဲခဲ့တာလို့ နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာရှင်းလင်း။
–	အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းအပေါ် ခြေစွမ်းမကောင်းဘဲ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲအပေါ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှု မြင့်တက်နေပြီး အဓိကအားဖြင့် တီယာနီနေရာကို ဝင်ရောက်ကစားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း အလွန်အမင်း ကွာဟခဲ့တဲ့ ကိုလာစီနက်ခ်ျအပေါ် ရှုတ်ချနေကြ။
–	နောက်ခံလူ ဆိုကရာတစ် ပါပါစတာသိုပူးလော့စ်ရဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ နာပိုလီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှုက သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပြီလို့ သိရပြီး လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အပြောင်းအရွှေ့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖွယ်ရှိနေ။
–	ဖူလ်ဟမ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး ပြန်ချစ်သွားကြပြီလို့ ဒါနီ စီဘာယော့စ်ရဲ့ ဖန်တီးပေးပို့မှုကနေ အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့အပြီးမှာ တိုက်စစ်မှူး အက်ဒီ နကီးတီးယားက ထုတ်ဖော်ပြောကြား။
–	အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အသင်းကို အားဖြည့်ဖို့အတွက် ဟာတမ် ဘန်အာဖာ၊ မာရီယို ဂေါ့ဇားနဲ့ အက်ဒင်ဆန် ကာဗာနီတို့လို ဝါရင့်ကစားသမားတွေကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ ခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေ။
–	အာဆင်နယ်နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာက သူတို့အနေနဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းကို ကံကောင်းလို့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာလို့ ဝန်ခံလိုက်ပြီး ဒါပေမယ့် သူတို့တွေအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း တိုးတက်လာတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး အရင်ကဆို ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆို အရှုံးနဲ့ သရေပဲလို့ သုံးသပ်သွား။
–	အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို ဂရာနစ် ချာကာ၊ ဒါနီ စီဘာယော့စ်တို့ နှစ်ဦးနဲ့ပဲ တည်ဆောက်လို့ မရဘဲ တကယ့်အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် သောမတ်စ် ပါတေးနဲ့ ဟူဆင်းမ် အောဝါတို့လို ကစားသမားတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ ESPN သုံးသပ်။
–	အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဓိက နောကျခံလူ ကီရနျ တီယာနီရဲ့ အခွအေနကေ ကွှကျသားအနညျးငယျ နာကငျြသှားတာဖွဈတယျလို့ သိရပွီး ပွငျးထနျမှု မရှိကွောငျးနဲ့ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးအပွီး ပှဲအမီ မသကျသာတာကွောငျ့သာ မသုံးစှဲခဲ့တာလို့ နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာရှငျးလငျး။
–	အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဝကျဈဟမျးအသငျးအပျေါ ခွစှေမျးမကောငျးဘဲ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ပှဲအပျေါ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှု မွငျ့တကျနပွေီး အဓိကအားဖွငျ့ တီယာနီနရောကို ဝငျရောကျကစားပွီး စှမျးဆောငျရညျခငျြး အလှနျအမငျး ကှာဟခဲ့တဲ့ ကိုလာစီနကျချြအပျေါ ရှုတျခနြကွေ။
–	နောကျခံလူ ဆိုကရာတဈ ပါပါစတာသိုပူးလော့ဈရဲ့ အေးဂငျြ့နဲ့ နာပိုလီတာဝနျရှိသူတှရေဲ့ ဆှေးနှေးမှုက သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပွီလို့ သိရပွီး လာမယျ့ ရကျပိုငျးအတှငျး အပွောငျးအရှအေ့တှကျ စီစဉျဆောငျရှကျသှားဖှယျရှိနေ။
–	ဖူလျဟမျနဲ့ပှဲမတိုငျခငျမှာ ရနျဖွဈခဲ့ကွတဲ့ သူတို့နှဈဦး ပွနျခဈြသှားကွပွီလို့ ဒါနီ စီဘာယော့ဈရဲ့ ဖနျတီးပေးပို့မှုကနေ အသငျးအတှကျ အနိုငျဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့အပွီးမှာ တိုကျစဈမှူး အကျဒီ နကီးတီးယားက ထုတျဖျောပွောကွား။
–	အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အသငျးကို အားဖွညျ့ဖို့အတှကျ ဟာတမျ ဘနျအာဖာ၊ မာရီယို ဂေါ့ဇားနဲ့ အကျဒငျဆနျ ကာဗာနီတို့လို ဝါရငျ့ကစားသမားတှကေို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ရရှိနိုငျမှာဖွဈလို့ ချေါယူဖို့ တိုကျတှနျးမှုတှရှေိနေ။
–	အာဆငျနယျနညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာက သူတို့အနနေဲ့ ဝကျဈဟမျးကို ကံကောငျးလို့ အနိုငျရရှိခဲ့တာလို့ ဝနျခံလိုကျပွီး ဒါပမေယျ့ သူတို့တှအေနနေဲ့ စိတျဓာတျပိုငျး တိုးတကျလာတာကိုတော့ အသိအမှတျပွုရမှာဖွဈပွီး အရငျကဆို ဒီလိုပုံစံမြိုးနဲ့ဆို အရှုံးနဲ့ သရပေဲလို့ သုံးသပျသှား။
–	အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကို ဂရာနဈ ခြာကာ၊ ဒါနီ စီဘာယော့ဈတို့ နှဈဦးနဲ့ပဲ တညျဆောကျလို့ မရဘဲ တကယျ့အခြိနျတှမှော အသုံးပွုနိုငျမယျ့ သောမတျဈ ပါတေးနဲ့ ဟူဆငျးမျ အောဝါတို့လို ကစားသမားတှေ လိုအပျနတေယျလို့ ESPN သုံးသပျ။
၂၁.၉.၂၀၂၀၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၅ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၀.၉.၂၀၂၀
တောငျပံမှာ အိုငျးယကျဈထှကျ ဂိုးဖနျတီးစကျကိုပဲ...
Analysis • La Liga • Ligue1 • Premier League • Serie A
၂၀၂၁-၂၂ ရာသီ မှတျတမျးအရ မုသာဝါဒ ကြှမျးကငျြလှနျးတဲ့...
Article • Ligue1 • Transfer News
အရောငျးပိုငျးမှာ အိုငျးယကျဈတို့ထကျ ဆရာကတြဲ့...
Analysis • Article • Premier League • Transfer News
ခြဲလျဆီးတို့ ၃-၄-၃ စှနျ့လှတျသှားမလားနဲ့ ရာဖငျညာ...
La Liga • Premier League • Transfer News
ရာဖငျညာကို မရနိုငျတော့လို့ ရီးရဲလျမကျဒရဈကွယျပှငျ့ဘကျ...